Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan har'a Finfinneetti gaggeeffama
Finfinnee, Onkololeessa 28, 2009(oromiapo) – Siimpooziyamiin iikoo haaydirooloojii idil addunyaa 2ffaan Afrikaatti qophaa’u har'a Finfinneetti gaggeeffama.
Siimpooziyamichi “Iikoo haaydirooloojiin Afrikaa lubbu qabeeyyii bishaan keessaaf, tajaajila iikoo haaydirooloojii fi jijjiirama qabeenya qilleensaaf hin jilbiinfanne” mata duree jedhuun gaggeeffama.
Qorannoo fi qo’annoowwan qulqullina bishaanii, ammeentaa fi qabeenya lubbu qabeeyyii bifa waaraa ta’een bulchuu fi misoomsuun oomishaa fi oomishtummaa diinagdee fi hawaasummaa mirkaneessuu gargaaran ni dhiyaatu.
Siimpooziyamicharratti arditiirraa hayyoonni damichaa, ambaasaaddaroonni, ministiroonnii fi dhaabbileen miti mootummaa ni hirmaatu.
Ministeerri Bishaan Jallisii fi Elektiriikaa odeeffannoo nuuf ergeen, sagantaa bishaanii 21ffaarratti “UNESCO”n Ityoophiyaatti wiirtuun iikoo haaydirooloojii Afrikaa akka hundeeffamu murteessun isaa ni yaadatama.
More in this category: « Wabii nyaataa mirkaneessuuf aanolee 90 keessatti hojiin ni hojjetama Atleet Haayilee Gabrasillaasee Pireezdaantii Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa ta’ee filatame »
Torbe Kana 1700
Ji'a Kana 1700
01/05/07 irraa eggalee 3422871
Kan Amma Daawwachaa Jiran 33